PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မဲဆောက်က ကေအင်ယူခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်မယ်လို့ ထိုင်းကပြော
မြန်မာ ကလေးစစ်သားဟောင်း အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ ထွက်ဆိ...
ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် စာသင်ကျောင်း ၁၀ကျော် ပိတ်ပစ်လု...
ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ....( မြန်မာ vs အိုမန်... ) အ...
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွ...
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တိုင်းရင...
ကေအိုင်​အေ သ​ဘောတူညီချက် မရဘဲ အပစ်ရပ်​ရေး ​လက်မှတ်...
ဥရောပရောက် မြန်မာတွေရဲ့ ညီလာခံ
အန်အယ်ဒီက တရားစွံမှာမို့ အာဏာ မလွှဲတာလို့ဆို
ရုပ်သံ - ပရိသတ် ပွဲကြမ်းလို့ ရပ်လိုက်ရတဲ့ မြန်မာ-အ...
၈၈၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည် နှိုးဆော်ချက်
တိုင်းရင်းသားများနှင့်အစိုးရ ပဋိပက္ခ ညှိနှိုင်းပေးရန...
ဦးထွန်းမြင့်နိုင်၏ ကြီးထွားလာသော အင်ပါယာ
တပ်တွင်း နှင့် အစိုးရသစ် များအတွင်း အက်ကြောင်းများရှိ
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နှင့် ဖြစ်ပွါးသည့် တိုက်ပွဲအတွင်း...
မြန်မာအစိုးရနှင့် KIO အပစ်ရပ်ဆိုင်းရေး လက်မှတ်ရေးထ...
SSPP နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ မြန်မာစစ်တပ် ...
The Lady ( မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ )
မဲဆောက်က ကေအင်ယူခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်မယ်လို့ ထိုင်...
SSPP/ SSA ဌာနချုပ် သိမ်းပိုက်ရန် အသေခံတပ်ဖြင့် နည်...
ဥရုချောင်းဖျားတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည် ပူးတွဲ ကြေညာခ...
မြန်မာကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးဖို့ အာဆီယံ အဆင်သင့် မဖြစ်သေး
ဖက်ဒရယ် ပါလီမာန် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် MPU ဥက္ကဌ နှင့် မ...
ALD(Exile-Japan) ၏ (၆)နှစ်မြောက် ညီလာခံနှင့် တတိယအ...
The Burma Conspiracy ရုပ်ရှင်အစအဆုံး
ထိုက်တန်တဲ့နေရာ ရရှိရန် ထိုက်တန်တဲ့ ပေးဆပ်မှု ရှိရမ...
July 23, 2011, နော်ဝေမှာ ၇ ဦးသေတဲ့ ဗုံးခွဲမှုနဲ့ ...
အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တို့၏ သမီးများက ပြည်သူကို စော်ကားသည...
နော်ဝေ အကြမ်းဖက်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်မှု
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် ဟီလာရီ ကလင်တန်...
ရွာသား ၂ ဦးကို အစိုးရစစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့
ပထမဆုံးအကြိမ် တရုတ်က ကချင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆေးဝါး...
SSA က တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင်
မြန်မာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူဖို့ အချိန်မတန်သေး၊ NLD ရ...
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒီကေဘီအေနဲ့ တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်
ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်မှ အနည်းဆုံး ဗ...
SSA က မြန်မာစစ်တပ် နောက်တန်းစခန်းများကို တိုက်ခိုက်
ကေအိုင်အေအဖွဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်၊ လက်နက်များ ...
ယနေ့ အာဇာနည်နေ့ မြင်ကွင်း
ဟောလီဝုဒ်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို မီဒီယာထိုးစစ်ဆင် လိ...
အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ သွားရောက်သူ များပြား
(၆၄)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(တ...
မလေးရှားတွင် မွန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြော...
SSPP/SSA ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ် နှင့် ၅ မိုင်ကျော်အကွာ...
အစိုးရတပ် ကချင်ဒေသတွင် အကျများ
အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဂျပန်အသင်း ဗိုလ်စွဲ
KIA ဒေသ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု မှတ်တမ်းရု...
မြန်မာ အလှည့်ကျဥက္ကဌ ဖြစ်သင့်မသင့် နိုင်ငံတကာ သဘောထ...
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် စခန်းတချို့ ဆုတ်ခွာ
တင်အောင်မြင့်ဦး ကျုးလွန်ခဲ့သော အစုလိုက် အပြုံလိုက...
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရနိုင်ဖွယ် ရှိသော ကလေ...
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နဲ့ ကြံ့ဖွတ်စစ်အစိုးရ စစ်တပ်ကြား ...
စစ်တပ်မှ ကိုယ်ဝင်ဆောင် မိခင်နှင့် ကလေးငယ်ပါ အဓမ္မြ...
ဗိုလ်မှူးစောဘိ၏ ခွဲထွက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ စစ်ရေ...
မြန်မာအစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် စစ်ဆင်ရေး ဂျီန...
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး ထောက်ခံဖို့ အာဆီယံ...
မြန်မာစစ်တပ်ထံ လွဲပြောင်းမည့် စစ်ကေားများ ထပ်မံရော...
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကချင်အမျိုးသမီး ၇ ဦးကို ပေါ်တာဆွဲ
ရှမ်း​ပြည်တပ်မ​တော်နှင့်​ အစိုး​ရတပ် ၄ ရက်ဆက်တိုက်...
ဂျပန်-တိုကျိုမြို့ ၌ ကျင်းပသော စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း...
KIA အပစ်ခတ်ရပ်စဲရန် ကချင်လူထု မလိုလား
မြန်မာသံရုံး နောက်ထပ် အရာရှိတဦး အမေရိကားမှာ ခိုလှုံ
ရှမ်းတပ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခံရဟု SSA တောင်ပိုင်းပြော
အကျဉ်းထောင်မှ မိုင်းကွင်းသို့ ...
မြန်မာ့အရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဂျပန်လွှတ်တော်တွင် ကြား...
SSPP/SSA ဌာနချုပ်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန် မြန်မာတပ်သား...
ကြံ့ဖွတ်ပါတီကိုယ်စားများကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဖိတ်ေ...
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် SSA နောက်ဆက်တွဲ တိုက်ပွဲကြောင့် ...
AUN-JAPAN ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပထမ အကြိမ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆေ...
တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါး - ရတနာမြေမှ အမျိုးသမီး...
KIA ရှေ့တန်းဌာနချုပ်ကို မြန်မာအစိုးရတပ်က လက်နက်ကြီ...
ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ...
NLD ရုံးချုပ် ဝင်စီးမှာလား စိုးရိမ်မှုဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ညောင်ဦးဈေး လည်ပတ် (ရုပ်သံ)
ဂျပန်သို့ တတိယနိုင်ငံ အစီအစဉ် ကရင်ဒုက္ခသည် ၅၀ဦး ထပ...
နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ထောင် ၃ထောင် လေ့...
(၄၉)နှစ်မြောက် သမိုင်းဝင် ၇ ရက် ဇူလိုင် ကျောင်းသား...
ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ အချိန်ယူရမယ်လို့ အစိုးရက KIO ထ...
မြ၀တီရှိ BGF တပ်ဖွဲ့အား KNLA ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်၊ ၃ဦး ...
ဌာနချုပ်ကိုစွန့်ခွါရန် SSPP/SSA အား RCSS/SSA တိုက်...
နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင...
မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ ပြန်ပေးဖို့ ဂျပန် စဉ်းစားနေ
ဒေါ်စု ပုဂံ ကိုရောက်ပြီ
သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်း နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တေ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် သွားကြမည့် လုပ်...
မဲဆောက်က ကေအင်ယူခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်မယ်လို့ ထိုင်းကပြော
ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် မယ်ဆောက်မြို့
25 ဇူလှိုင်လ 2011 ,
ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ မဲဆောက်မှာ လာခိုအောင်းနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုံးဖေါက်ခွဲခဲ့တဲ့ တရားခံတွေနဲ့ မဲဆောက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကေအင်ယူ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်ရှားရေး ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ တာခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒီနေ့ မဲဆောက်မှာ သတင်းထောက်တွေ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ခိုနားရာ စခန်းလို့ မြင်ပြီး ဖယ်ရှား ပေးဖို့ ထိုင်းအစိုးရကို ပြောခဲ့သလို မဲဆောက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကေအင်ယူ လူကြီးတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ လိပ်စာတွေကို မြန်မာဖက်က ပေးပြီး ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆို လာတဲ့အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ပိုကောင်းအောင်နဲ့ မြန်မာဖက်က ပိတ်ထားတဲ့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကို ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ဒီလိုဖယ်ရှားဖိ်ု့ ဆောင်ရွက်တာလို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာဖက်က ဒီလို တောင်းဆိုမှုတွေကို အရင် ထိုင်းအစိုးရ အဆက်ဆက်မှာလည်း တောင်းဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုံးက အနောက်နိုင်ငံတွေက ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ မြန်မာ အတိုက်အခံတွေအပါ် ထားတဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် ထိုင်းအစိုးရ အဆက်ဆက်က အနောက် နိုင်ငံတွေကို မလွန်ဆန် နိုင်တဲ့အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူ။
အခုတကြိမ် မြန်မာဖက် တောင်းဆိုတဲ့ အချိန်မှာတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း ဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ မြန်မာ အတိုက်အခံတွေအပေါ် အထောက်အပံ့တွေ လျော့လာတာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စီးပွါးရေး အကြပ်အတည်းအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှု လူမှုရေးပြသနာ စတာတွေ ပိုဖြစ်လာနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပိုမို ရင်းနှီးမှုရအောင် မြန်မာအစိုးရ တောင်းဆို တာတွေကို ဆောင်ရွက် ပေးသွားနိုင်တယ်လို့ နယ်စပ်က အကဲခတ်တွေက ပြောပါတယ်။
ကေအင်ယူ ဒုဥက္ကဌ ဖဒို ဒေးဗစ်တာကပေါကတော့ မဲဆောက်မှာ ကေအင်ယူ ခေါင်းဆောင်တွေ နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်နယ်မြေမှာ ကိုယ်နေထိုင်ကြပြီး မဲဆောက်မှာ စစ်ရေးနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ဘူးလို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့ ပြည်တွင်းကို ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းအဓမ္မ ပြန်မောင်းထုတ်တာမျိုးကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်လေ့ မရှိဘူးလို့ သူကပြောဆိုပြီး ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ပြောလေ့ရှိပေမဲ့ လုပ်လေ့မရှိဘူးလို့ ဆိုပါသည်။
အတင်းအဓမ္မ ဖယ်ရှားတာမျိုး လုပ်လာရင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကြီးကြပ်မှုကို တောင်းခံရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ် - ဘီဘီစီ
Posted by PNSjapan at 3:41 PM